August 4, 2019 - Online Bunner
သင့်ကို မချစ်နိုင်တဲ့သူ တစ်ယောက်ကို အတင်းကြီး တွယ်ကပ်မနေနဲ့
သင့်ကို မချစ်နိုင်တဲ့သူ တစ်ယောက်ကို အတင်းကြီး တွယ်ကပ်မနေပါနဲ့ တကယ်တော့ သူတို့ဟာ သင်ထင်သလို တန်ဖိုးမကြီး လှပါဘူး တန်ဖိုးဆိုတာ သင့်စိတ်က သတ်မှတ်ခြင်းနဲ့ ဆိုင်ပါတယ် ပိုင်ဆိုင်လိုစိတ် ကြီးမားလာတာနဲ့ အမျှ တန်ဖိုးက တက်လာပါတယ် ။ ပိုက်ဆံနှစ်ရာလောက်သာ တန်တဲ့ ဖောင်တိန် တစ်ချောင်းကို တန်ဖိုးကြီးတယ် […]
အရမ်းချစ်ကြပြီးမှ သေကွဲ ကွဲခဲ့ရတဲ့အဆိုတော်လေးနဲ့ မော်ဒယ်ကောင်မလေး ရဲ့ကြေကွဲစရာ ဖြစ်ရပ်
အရမ်းချစ်ကြပြီးမှ သေကွဲ ကွဲခဲ့ရတဲ့ အဆိုတော်လေးနဲ့ မော်ဒယ်ကောင်မလေး ရဲ့ ကြေကွဲစရာ ဖြစ်ရပ် အရမ်းကို လိုက်ဖက်တဲ့ အတွဲ တစ်တွဲ ဖြစ်ပြီး အရမ်းကို ချစ်ကြလွန်းလို့ မီဒီယာပေါ်မှာ ခဏခဏ ဖော်ပြခြင်း ခံရတာကြောင့် မြင်သူ တကာက မနာလို လောက်အောင် ဖြစ်ကြပါတယ် မကြာခဏ […]
နေရာမှားပြီး လိင်ဆက်ဆံနေတာကြောင့် ကလေးမရ ဖြစ်နေတဲ့လင်မယားကိုလမ်းကြောင်းပြန်တည့်ပေးလိုက်ရတဲ့ဖြစ်ရပ်
နေရာမှားပြီး လိင်ဆက်ဆံနေတာကြောင့် ကလေးမရ ဖြစ်နေတဲ့ လင်မယားကို လမ်းကြောင်းပြန်တည့်ပေးလိုက်ရတဲ့ဖြစ်ရပ် (ဗဟုသုတအဖြစ်တင်ပေးခြင်းသက်သက်ပါ) … နောက်ပိုင်းတော့ အသက် ၂၆ နှစ် အမျိုးသားနဲ့ အသက် ၂၄ နှစ် အမျိုးသမီး ဒီလင်မယားစုံတွဲဟာ ခုနှစ် အစောပိုင်းမှာ ဆရာဝန်မ ဒေါက်တာလွီဟောင်မီထံ လာပြပါတော့တယ်။ ကလေး ရနိုင်ဖို့အတွက် […]
ဧရာဝတီတံတားမှ ခုန်ချသွားသော ကိုပြည့်ဟိန်းထက်အား တွေ့ရှိ (ရုပ်သံ)
ဧရာဝတီတံတား ရတနာပုံ စစ်ကိုင်းဘက်ခြမ်းမှ ခုန်ချသွားသော ကိုပြည့်ဟိန်းထက်အား တွေ့ရှိဟု ကနဦးသတင်းရ။ 2.8.2019 ရက်နေ့ ညနေ ၅ နာရီခန့်က ဧရာဝတီတံတား ရတနာပုံ စစ်ကိုင်းဘက်ခြမ်းတွင် ခုန်ချသွားသော စစ်ကိုင်းမြို့နယ် ကျောက်ဆည် ကုန်းရွာနေ ကိုပြည့်ဟိန်းထက် အား အရေးပေါ်ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့ စစ်ကိုင်း SERT […]
သင့်ကို လူချစ်လူခင်ပေးစေမယ့် အလွယ်ကူဆုံးနည်းလမ်း
သင့်ကို လူချစ်လူခင်ပေးစေမယ့် အလွယ်ကူဆုံးနည်းလမ်း ကျွန်တော်ဘ၀ရဲ့ လက်တွေ့ပါ၊ ဒီနည်းကို ဘယ်စာအုပ်ထဲမှာ ဖတ်ဖူးမှန်းမမှတ်မိတော့ပေမယ့် အဲဒီအချိန်ကစပြီး ယနေ့အချိန်အထိ ဒီနည်းလေးကိုကျင့်သုံးလာခဲ့ တာ ကြာခဲ့ပါပြီ။ အရမ်းလွယ်ကူသလို အရမ်းလည်း ထိရောက်ပါတယ်။ မေတ္တာပို့နည်း သင် နံနက်အိပ်ယာထလို့ မျက်နှာသစ်တော့မယ့်ရေကို စကိုင်းပြီဆိုတာနဲ့ ဗုဒ္ဓံသရဏံဂစ္ဆာမိဆိုပြီး မျက်နှာကိုရေနဲ့ တစ်ခါသစ်ချ- အဲလိုပဲ […]
ချစ်သူအပေါ် အရမ်းကို စိတ်နှစ်ပြီး အရူးအမူး ချစ်တဲ့သူတွေ ဖြစ်တတ်တဲ့ ဆိုးကျိုး ၅ ခု….
ချစ်သူအပေါ် အရမ်းကို စိတ်နှစ်ပြီး အရူးအမူး ချစ်တဲ့သူတွေ ဖြစ်တတ်တဲ့ ဆိုးကျိုး ၅ ခု ၁။ ပူပင်သောက ရောက်ခြင်း ကိုယ့်ရဲ့ အချစ်စိတ်တွေ အားလုံးက သူမှ သူဘဲ ဖြစ်နေတဲ့ အခါ သူ့ဘက်က ကိုယ့်ကို ထားသွားမှာ၊ အမှားလုပ်မိမှာ၊ ကိုယ့်အပေါ် သစ္စာဖောက်မှာ […]
နာရီပိုင်း အရွယ်သာ ရှိသေးတဲ့ ကလေးငယ်လေးကို မြင့်မားတဲ့ အပူချိန်အောက်မှာ စွန့်ပစ်ခဲ့ (ရုပ်သံ)….
ဒီအဖြစ်အပျက်ကတော့ အင်္ဂါနေ့ကဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပြီး ကလေးငယ်လေးကိုတော့ Terrell Phillips လို့အမည်ရှိသူက တွေ့ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် ပထမတုန်းကတော့ စောင်နဲ့ပတ်ထားတာလေးက တိရစ္ဆာန်(သို့)အမှိုက်တစ်ခုလို့ ထင်နေခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။ သို့ပေမယ့် စိတ်ထဲကသိကအောင့်ဖြစ်ပြီး သွားကြည့်ခဲ့မိရာ ချက်ကြိုးဖြတ်ထားခါစ မသန့်ရှင်းရသေးတဲ့ ကလေးငယ်ဖြစ်နေတာကို တွေ့ရှိခဲ့ရတာပါ။ ကလေးကတော့ မိန်းကလေးလို့ သိရှိရပါတယ်။ တွေ့တွေ့ချင်းမှာပဲ ၉၁၁ ကိုဖုန်းခေါ်ပြီး အကြောင်းကြားခဲ့တာပါ။ […]
Toolbox ထဲ ပိုက်ဆံ ခဏခဏထားသူများ သတိပြုဖို့…..
Toolbox ထဲ ပိုက်ဆံ ခဏခဏထားသူများ သတိပြုဖို့… တရုတ် ဆိုင်ကယ်(ခုံရှည်)ပိုင်ရှင်များ အထူးသိ စေအပ်ပါသည် မြန်မာပြည်တစ်ဝှမ်း အသုံြး့ပုစီးနင်းလျှက်ရှိသော တရုပ်ဆိုင်ကယ် ခုံရှည်အမျိုးအစား၏ ၀မ်းဗိုက်(toolbox) အတွင်း ငွေစက္ကူ နှင့် အဖိုးတန်ပစ္စည်းများ ထည့်သိမ်း သော့ခတ်ခြင်းမှာ လုံခြုံစိတ်ချရမှု မရှိကြောင်း သိရသည် ကျွန်တော့် မိတ်ဆွေတစ်ဦး […]
အမျိုးသမီး(၅)ဦးကို အိမ်ခေါ်ကာ အဓမ္မကျင့်သတ်ပစ်ပြီး၊ ခြံထဲမှာမြှုပ်ခဲ့တဲံ သူ….
တောင်အာဖရိကနိုင်ငံ၊ Hazyview အမည်ရ မြို့မှာ အမျိုးသားတစ်ယောက်ဟာ Facebook ကနေ ချစ်သူဖြစ်တဲ့ အမျိုးသမီး(၅)ဦးကို နေအိမ်မှာ ဖိတ်ခေါ်၊ အကြမ်းဖက် အဓမ္မပြုကျင့်ပြီး၊ ၎င်းရဲ့ နေအိမ်ခြံဝင်းထဲမှာပဲ လူမသိသူမသိ မြှုပ်နှံခဲ့ကြောင်း ရဲတပ်ဖွဲ့က ဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်… အဆိုပါ လူသတ်ရာဇာ အဓမ္မကျင့် သတ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့ အမျိုးသမီးတွေဟာ အသက်(၁၅)နှစ်မှ […]
အနည်းဆုံး တကြိမ်လောက်ဖြစ်ဖြစ် ချစ်သူစုံတွဲတိုင်း အတူတူ စမ်းသပ် လုပ်ကြည့်သင့်တဲ့ အရာလေးတွေ
စုံတွဲတိုင်း အနည်းဆုံး တကြိမ်လောက်ဖြစ်ဖြစ် အတူတူ စမ်းသပ် လုပ်ကြည့်သင့်တဲ့ အရာလေးတွေ စုံတွဲတိုင်းရဲ့ ဆက်ဆံရေး ဆိုတာ ငယ်ရွယ်ပျိုမြစ်တဲ့ အရွယ်မှာ ပိုပြီး တက်ကြွ လန်းဆန်းနေတာ ဓမ္မတာပါပဲ အသက်ကြီး လာတာနဲ့ အမျှ ရင့်ကျက်မှုတွေနဲ့အတူ ငယ်ငယ်တုန်း ကလောက် အချစ်တွေလန်းဆန်း မနေတော့ပါဘူး။ ဒီလိုအရွယ်ကောင်းတုန်းမှာ […]